Maxaa Loo Isticmaalaa CRM? Faa'iidooyinka Maareynta Xiriirka Macaamiisha
Isniin, February 14, 2022 Isniin, February 14, 2022 Douglas Karr
Waxaan ku arkay qaar ka mid ah hirgelinta CRM waaweyn ee xirfadeyda… iyo qaar gebi ahaanba cabsi leh. Sida tiknoolajiyad kasta, hubinta in kooxdaadu tahay waqti yar oo ka shaqeynaya iyo waqti dheeraad ah oo qiimo leh waa furaha hirgelinta weyn ee CRM. Waxaan arkay nidaamyo CRM oo si liidata loo hirgaliyay oo xayiraya kooxaha iibka… iyo CRM-yada aan la isticmaalin ee iskudarsaday dadaalka iyo shaqaalaha wareersan.
Waa maxay CRM?
In kasta oo aan dhammaanteen ugu yeerayno barnaamijka kaydiya macluumaadka macmiilka CRM, ereyga maamulka xiriirka macaamiisha wuxuu koobayaa geedi socodka iyo istaraatiijiyadaha iyo waliba tikniyoolajiyadda. Nidaamka CRM waxaa loo isticmaalaa in lagu duubo, lagu maareeyo, laguna falanqeeyo isdhexgalka macaamiisha inta uu nool yahay macaamilka. Iibinta iyo suuqgeyntu waxay u adeegsadaan xogtaan si ay u hagaajiyaan xiriirka iyo ugu dambeyntiina, qiimaha macaamilkaas iyada oo loo marayo haynta iyo iibka dheeriga ah.
Halkan Ka Hubso Tirakoobyada Ugu Dambeeya ee Warshadaha CRM
Waa maxay Faa'iidooyinka Isticmaalka CRM?
Ma leedahay koox iib ah oo maamusha keydkooda macluumaadka u gaarka ah? Maareynta koontada iyo wakiillada adeegga ee maareeya qoraalladooda ku saabsan macaamiil kasta? Markay shirkaddaadu sii korayso, dadkaaga ayaa wareejinaya, dad aad iyo aad u tiro badanna waxay u baahan yihiin inay la xiriiraan rajooyinka iyo macaamiisha… sidee baad ula socon doontaa?
Adoo adeegsanaya nidaam dhexe oo udhaxeeya macaamiisha taabashada iibka, taageerada, iyo suuqgeynta, xogta la uruuriyay waxay noqoneysaa mid faa iido badan u leh ururka iyo keydka macluumaadka ee marin uhelka kale. Halkan waxaa ah toban dariiqo oo ay ururradu u arkaan soo-celin wanaagsan maal-gashigoodii CRM maalmahan.
Warbixinta ku saabsan suuqgeynta, iibinta, iyo haynta ayaa udub dhexaad u ah waqtiga dhabta ah xitaa waa la sii saadaalin karaa iyadoo ku saleysan iibsashada safarada iyo dhuumaha iibka.
Integration barnaamijyada kale ee otomaatigga suuqgeynta, barnaamijyada xisaabinta, barnaamijyada xogta macaamiisha, iyo nidaamyo badan ayaa lagu gaari karaa.
qalabaynta waxay yareyn kartaa dadaalka iyo dhibaatooyinka ay keeneen riixitaanka iyo jiidista xogta nidaamka nidaamka.
Habsocodsiinta waa lagu fulin karaa halka kicinta muhiimka ah la dejiyo isla markaana shaqaalaha ku habboon la ogeysiiyo marka macaamiisha ay taabtaan u baahan yihiin in la sameeyo.
Korinta ololeyaal ayaa la hirgelin karaa si looga caawiyo hagista iibsadayaasha marinka iibka.
Customer qanacsanaanta iyo haynta way sii kordhin kartaa maadaama wax yar oo gacan-ka-bixis ah oo loo baahan yahay in la sameeyo iyada oo aragtida 360-degree ee macmiil kasta si fudud loo heli karo.
Kooxaha iibka waa lala socon karaa lana tababari karaa si loo dardar geliyo waxqabadkooda. Jawaab celinta ka soo baxda iibka ayaa la isugu geyn karaa suuqgeynta si loo wanaajiyo tayada iyo bartilmaameedka waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyo istaraatiijiyadaha xayeysiinta.
Suuq- ololeyaasha waa lala socon karaa waxqabadkooda iyo wanaajinta ka faa'iideysiga qeybinta iyo shakhsiyeynta iyadoo lagu saleynayo xogta saxda ah. Maaddaama hoggaamiyeyaasha loo beddelayo macaamiisha, ololeyaasha si habboon ayaa loogu sifeyn karaa iibka, iyada oo la siinayo sirdoon dheeri ah oo ku saabsan saameynta istiraatiijiyad kasta.
Fursadaha waa la aqoonsan karaa waxna looga qaban karaa maadaama nidaamka si buuxda loogu adeegsaday iibinta, kor u qaadista, iyo haysashada macaamiisha.
Aqoonta ayaa loo kaydiyaa macmiil kasta si isbeddelada dadka iyo habsocodku u carqaladeyn waayo-aragnimada macaamilka.
Haddii maareeyayaasha koontadaada, wakiillada adeegga macaamiisha, iyo wakiillada iibku ay si sax ah u duubayaan is-dhexgal kasta oo macaamil ah oo ku jira CRM-gaaga, meheraddaadu waxay leedahay bakhaar aad u qiimo badan oo xog ah oo wax looga qabanayo Shaqaalahaaga oo dhami way wada shaqeyn karaan oo waxay yeelan karaan faham buuxa oo ku saabsan qiimaha iyo taariikhda rajo kasta ama macmiil kasta. Iyo, adoo fiiro gaar ah leh, waxay hagaajin kartaa xiriirka macaamilkaas.
Hirgelinta weyn ee CRM waa inay u oggolaataa xoogaa is-dhexgal iyo otomatig ah, wax faa'iido leh uma lahan sanduuqa maaddaama qalabkaaga suuq-geynta CRM ay isaga dhigi karaan inay yihiin.
Haddii aad maalgashi ku sameyneyso SaaS CRM, u diyaargarow inay noqoto ku tiirsanaan weyn oo loogu talagalay kobcinta tikniyoolajiyadda mustaqbalka iyo miisaaniyadda. Hubso inaad haysato nidaam miisaankeedu yahay mid la awoodi karo, oo la midoobaya tan kale oo nidaamyo kale ah, isla markaana si isdaba joog ah ugu daraya astaamo dheeri ah iyada oo loo marayo hadiyado wax soo saar leh iyo wax soo iibsi.
Sida Saaxiibka fulinta CRM, wax yar oo aan aragno CRM si buuxda isku dhafan, otomatig ah, loona adeegsaday, ayaa yaraanaya soo noqoshada maalgashiga tikniyoolajiyadda! CRM waa inuu noqdaa xalka ka caawiya meheraddaadu inay noqoto mid waxtar badan oo waxtar leh, oo aan ka yarayn. Xullo madal iyo lamaane aad si hufan ugu hirgeliso.
Goorma ayey Iibinta Iyo Suuqgeyntu U Baahan Yihiin CRM?
Dadkuna NetHunt CRM waxay soo saartay macluumaadkan kadib markay falanqeeyeen habdhaqanka macaamiishooda wixii kadambeeyay aafada.
In kasta oo wareegga iibka B2B uu noqon karo illaa iyo dhowr bilood, haddii aadan si sax ah u daweynin rajadaada, aamusnaan bay kaaga tagi karaan. Soo iibsiga macaamilku wuxuu leeyahay dabeecad isku murgsan waaxdaada suuqgeyntuna waxay u baahan kartaa isdhexgal fara badan ka hor intaan hoggaanku diyaar u ahayn inuu tijaabiyo-wado alaabtaada. Ugu dambeyntiina, shaqada iswaafajinta ee iibka iyo suuqgeynta ayaa muhiim u ah B2B si loo gaaro hufnaan dakhli oo run ah. Labadooduba waxay ubaahan yihiin tikniyoolajiyadda buundada si ay ugu socdaan isla wadadaas.
4 Talooyin si aad u horumariso Istaraatiijiyada CRM kaaga
Dadka at Ukun waalan waxaan isugu geeyey xog-ogaalkan oo ay ku jiraan talooyin aad u wanaagsan oo ku saabsan 4-ta marxaladood ee qorsheynta Istaraatiijiyaddaada CRM… Aragtida, Falanqaynta, Isku xidhka, iyo Xogta.
Tags: faa iidooyinka crmxikmadCRMcrm xog -ogaalnimoistiraatiijiyad crmmaamulka xiriirka macaamiishaxiiso leh crmsignalkawaa maxay crmgoorta la maalgashanayo crmmuxuu crm muhiim u yahaymaxaad u isticmaashaa crmmaxaad u isticmaashaa crm
Halbeegga Ciwaanka 101: Faa'iidooyinka, Hababka, iyo Talooyin